Indlela yokucoca iiBattery Posts, Gwema ukuQalisa iingxaki
Akufanele uvumele nantoni na ifike phakathi kweemoto yakho kunye noxilongo olufanelekileyo lwebhetri. Ukuba ufuna ukuba usuku lufike ekumeni ngokukhawuleza, ukuqhuba ngokuhamba ngebhalothi yezithuba yindlela yokwenza. Kuthatha kuphela i-millimeter yamanzi asele amhlophe ukuze kugcinwe imoto yakho.
Ibhetri yakho yemoto yinqanaba lokuqala (akukho nxeba ejoliswe kuyo) kuyo yonke inkqubo esebenzayo. Oku kuba kusetyenziswa ukuqala imoto!
Iimeko ezinxulumene neebhetri zeemoto kunye nezithuba zazo zenza indawo yokuzalisa ngokugqithiseleyo, okuza kubonakala njengemhlophe, i-residue ephumayo kwizithuba zebhetri. Njengoko ukubola kukhula, kuba nzima ukuba imoto yakho ixhumane ngamandla nebhethri. Yingakho kufuneka siwususe.
Kukho iimveliso ezininzi apho ukucoca ibhetri yakho kwaye uncede ukuyigcina ngale ndlela. Apha uya kufumana iibini, kodwa le ngcamango ifana nantoni na indlela yakho - fumana i-em ehlambulukileyo.
Isinyathelo sokuqala kwibhetri ecocekileyo kukususwa kwee-battery terminals. Awukwazi ukuhlamba iinyawo zakho ngeembadada zakho, kwaye awukwazi ukucoca ngokufanelekileyo i-post yebhethri kunye nezixhobo ezixhunyiwe.
Uya kufuna enye okanye ezimbini iifenethi ngokuxhomekeka ekumiseni kwakho. Khangela kwi-terminal, kufuneka ibe ne nut ngakwesinye icala kunye nelinye icala nokuba enye inambu, okanye isikwere esikhulu. Ukuba kukho isikwere esikhulu, uzakufuna kuphela umkhonto.
Ukuba yinto enye, yibambe ezimbini. Ungasebenzisa izixhobo zokugqibela ezivulekileyo okanye into engaphezulu kwiplanga yonke okanye i-Crescent wrench. Kukulungele ukusetyenziswa kwesixhobo esisisiseko xa sitholakala, kodwa ekubeni asiyiyo imishini yokuhamba ngemoto, ngamanye amaxesha kufuneka senze ukuba kwenzeke.
Kufuneka uhlale ususa intambo engalunganga kuqala. Beka isikhonkwane esisodwa kwi-nut yangaphandle kwaye (ukuba kuyimfuneko) enye ikhamlo ngaphesheya. Phendulela i-nut ngaphandle kweeyclock until ukhangele kwi-intshi ye-1/16 okanye kungenjalo indawo engavumelekanga kwi-bolt. Ukuba unethamsanqa, i-twist encinci iya kuyidonsa. Ukuba akunjalo, funda kwiinqununu zokususa.
Ukuba i-terminal yakho ibonakala idibeneyo , thabatha i- screwdriver ye- flat head flat kwaye uyibeke ngokugqithiseleyo i-terminal evulekile ngokuyifaka kwisithuba esiphantsi kwe-bolt. Ungazami ukucima i-terminal ukuya phezulu kwisithuba. Unokukrazula isithuba ngaphandle kwemiphumo emibi. Ukuba isenenkani, yinike amandla amakhulu okuguqula, mhlawumbi usebenzisa ezinye iipelisi ezinkulu ukuze zenze i-twist.
Oku kufuneka ukuyikhulule.
Ngoku ukuba ukhangele nje ibhetri kunye nezikhumbuzo, unokuzihlambulula.
Kukho iindlela ezininzi zokufumana ukubola kwizithuba zebhetri yakho. I-Folklore iya kukuxelela ukuba ungancothela i-Coca-Cola phezu kwebhetri yakho ukususa izinto ezimhlophe. Oku okunjalo kusebenza, kodwa ngaphandle kokuba uhlambulula izithuba zebhetri yakho kwisiqithi esishiyiweyo ngaphandle kokunikezelwa kweCoca, ndiya kunye nendlela ekhoyo yangoku (kunye necocekileyo).
Isitoreji sakho sezithuthi siya kuba neendlela ezimbalwa zokhetho lokususa i-corrosion, kwaye zonke zifana kakhulu.
Ikhonti yeVictor iboniswe nge-brush encinci, kodwa yayincinci.
Ngeemitha zokubheja zakho, yenza isisombululo kwizithuba zebhetri kunye neendawo zokuphela, ngakumbi ngaphakathi. Ukuba unobhontshisi oluncinane, unako "ukuxubha inkani yokwakha." Kuya kuqalisa ukuphosa, kwaye makwenze oku okwenziwe imizuzu embalwa, uze uwuhluthe ngamanzi amancinci. Ngoku faka ii-discs corrosion discs xa usebenzisa zona (jonga isinyathelo esilandelayo), faka kwakhona ii-terminals zakho, kwicala elihle kuqala, kwaye usubuyela kwishishini!
* Inqaku elincinci malunga nokukhathazeka kwemali: oku kudla ukutya kwamanzi akukho nto kodwa ukupheka i-soda kunye namanzi, ngoko zikhulule ukuba wenze ngokwakho!
Ndikhetha indlela yokugcoba neyoyiyo yokugcoba ibhetri yakho, esiza kuxoxa ngayo ngokulandelayo.
Indlela eyazamayo neyinyaniso yokufumana izithuba zakho zebhetri kunye neendawo zokugcina zihlambulukileyo ziquka ukuxubha kwentsimbi kunye negrisi elincinci. Uzakufuna ukukhwabanisa kwe-wire-stiffness. Ukuba unako ukuguqula i-crystal back and out kalula, oko kuphakathi okwaneleyo. Kufuneka unxibe ukukhusela kwamehlo, mhlawumbi nokuba ungasothuli. Ukuqhubhisa i-corrosion ngamanye amaxesha kubangela ukuba ibhabhise.
Ngama-terminals kwizithuba zebhetri, zitshintshe ngokutsha zonke iindawo, ingakumbi ngaphakathi kweendawo zokuphela, kuze kube yilapho ukubola kuphelile uze ukhangele kwisinyithi esicocekileyo.
Ibhulashi elinezinyo ezenza kube lula ukufikelela kwingxenye yangaphakathi.
Xa behlambulukile, fakela ii-discs zokurhoxisa xa usebenzisa zona (jonga isinyathelo esilandelayo), faka kwakhona ii-terminal, side side, kwaye ulungile ukuya!
Emva kokuba uhlambulule izithuba zakho zebhetri kunye nezikhumbuzo, ufuna ukuba bahlale ngaloo ndlela. Abanye abantu bafunga ngabo ba khuseli besikhuseli besikhokelo sokugcina i-corrosion away. Ndiye ndazama kwabo kwaye, ndothuka kukuba, babonakala besebenza kwinqanaba elithile. Ndaye ndabona ukubola kwiimoto ezazingenelela, ngoko ungazithembi ngokupheleleyo.
Ukusebenzisa iidiski kuhle kakhulu. Xa unqanyulwa ama-terminals, faka nje ii-discs, ufake i-disc ebomvu kwisithuba esihle kunye nokuluhlaza kwi-negative.
Ngoku kwakhona fakela iimitha zakho zebhetri, kuqala, kwaye zonke zihleliwe.
Izizathu ezibini zokuLungisa ukuGqirha kwi-Ford Focus
Ngaba iiBrakes zakho ziKhuselekileyo?
Ungayifaka njani iNqanaba lakho leNqwelo leNqwelo
I-Past Past Pastor inxaxheba kwiItaliyane
Indlela yokudlala Ifomathi yeBhola yeGolf ezine
I-Turtle Wax Black Box Cleaning kunye ne-Waxing Kit